Younis double century puts Pakistan in control
Click to copyhttps://apnews.com/88cedabcab0d484ca1f572635fd4b98f
HARARE, Zimbabwe (AP) — Younis Khan’s unbeaten double century turned the first test on its head Friday as Pakistan came back from a 78-run first-innings deficit to set Zimbabwe 342 to win the series-opener on the final day.
Younis faced 404 balls for his 200 not out, and went to his double hundred with a six the ball before captain Misbah-ul-Haq declared Pakistan’s second innings on 419-9. Pakistan had been 23-3 before Younis’ game-changing innings, which ultimately left Zimbabwe needing a hefty 329 more for an unlikely win at Harare Sports Club.
Akmal backed Younis up with an attacking half-century in their 118-run partnership for the sixth wicket before Akmal was run out by a combination of three Zimbabwean fielders. But No. 11 Rahat Ali contributed 35 not out in an unbeaten last-wicket partnership of 88 with Younis to continue Pakistan’s momentum, a stand that probably took the game out of Zimbabwe’s reach.
Offspinner Prosper Utseya claimed three late wickets for his 3-137 and seamers Tinashe Panyangara and Tendai Chatara had two wickets each, but Zimbabwe’s bowlers were nowhere near as effective as they were when they bowled Pakistan out for 249 in the first innings.
Zimbabwe’s last-day battle also will be made tougher by the absence of middle-order batsman Sean Williams, who declined to play because of the non-payment of player wages by the struggling board. The other players agreed to give Zimbabwe Cricket more time to catch up with their wages after threatening to go on strike twice during the tour.